Salady Kiwi sy udd - Resety Thermomix | ThermoRecipes
Salady Kiwi sy udd
Salady8 minitraOlona 3
Ny hafanana amin'ny fahavaratra dia ho avy ary ho an'ny Karakarao tsara ny tenanao lafatra ireo karazana salady ireo.
Tsy mbola nanandrana ilay kiwi amin'ny salady, fa manomboka izao dia heveriko fa ho mahazatra izany. Matetika aho no nanao azy ireo paoma ary volomboasary ary tiako ity kinova ity.
Tsy salady lehibe dia lehibe izy io. Raha toa ka apetraka eo afovoan'ny latabatra ao anaty sakafo izany dia ho an'ny olona 3. Matetika aho no manao azy io ho an'ny sakafo hariva ary ny vadiko DJs kely ary alaiko ny ambiny toa takelaka tokana.
La vinaigrette Manankarena tokoa izy, toa kely dia kely izany fa raha afangaro tsara amin'ny salady isika ary avelao hitsahatra vetivety dia tsara kokoa izany.
Safidy hafa dia ny fampiasana paty efa masaka, izay haingana kokoa noho izany ary hiala ny dingana voalohany.
1 Salady Kiwi sy udd
Fangaro voankazo manankarena sy mahasalama.
Fotoana manontolo: 8M
Rano mafana 250 g
Kisoa manta miendrika 24
40 g ny menaka oliva virjiny fanampiny
Vinaingitra misy divay fotsy 1 sotro
Voantsinapy 1 sotrokely
Dipoavatra 1 pinch
Ravina salady 6-8, julienned
Kiwi 2, voahitsakitsaka ary voahidy
150 g fromosy Burgos, diced
Arotsanay ao anaty vera ny rano, apetraka ao anaty fitoeram-bokatra varotra ny makarakara ary apetraka amin'ny toerany. Izahay dia manao fandaharana 7 minitra, maripana varoma ary hafainganam-pandeha 1. Niala izahay ary nitahiry.
Ariantsika avy ao anaty vera ny rano ary ataontsika amin'ny taratasy an-dakozia.
Ao anaty vera, ampio ny diloilo, vinaingitra, voantsinapy, sira sy dipay. Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Ao anaty vilia iray dia apetratsika ny salady ary eo amboniny no amoaranay ny voamadinika kiwi, ny loaka misy ny fromazy ary ny udid voatokana.
Manondraka ny vinaigrette izahay ary manompo.
Fanazavana fanampiny - Salady broccoli sy paoma
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Celiac, Salady sy legioma, Tsotra, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny 15 minitra, Resipeo amin'ny fahavaratra, fitondrana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Salady sy legioma » Salady Kiwi sy udd
Patri dia hoy izy:
OLE! Fa ahoana ny endriny? Tiako salady, ary raikitra ny fanomanako azy amin'ity herinandro ity. Misaotra betsaka noho ny hevitrao mba hanararaotana tsara ny thermomix-ko. Ah! Azoko atao ny maka tahaka azy amin'ny bilaogiko. Oroka lehibe iray amin'izy ireo
Valiny tamin'i Patri
Faly aho fa tianao izany, Patri! Mirary ny soa indrindra.
floren dia hoy izy:
Tiako ity fomba fahandro ity, nataoko mitovy amin'izany, salady marobe aho ary homaniko amin'ity faran'ny herinandro ity, misaotra ireo resinao, efa nahavita vitsivitsy aho.
Mamaly an'i floren
Faly aho fa tianao izany, Floren! Mirary ny soa indrindra.
Agueda dia hoy izy:
Tena tadiaviko ity recette ity, omaly nataoko ny resanao akoho volomboasary ary tiako be ny olon-drehetra. Iray hafa hamonjy, misaotra betsaka anao nanafaka ahy tamin'ny olana sasany. Miarahaba.
Valiny tamin'i Agueda
Misaotra betsaka anao nahita anay, Agueda! Faly aho fa tianao ny fomba fahitanay. Mirary ny soa indrindra.
Salady mahafinaritra, tsy mbola nanandrana azy io tamin'ny kiwi aho, fa raha mijery ireto sary ireto aho dia tsy hisalasala
Salama Mercedes, salady matsiro be io, tohizo ary andramo. Mirary ny soa indrindra.
Mª Teresa dia hoy izy:
Salady tsara, toa tsara dia tsara, ho karakaraiko amin'ity faran'ny herinandro ity, misaotra anao nizara ireto recette mahafinaritra ireto
Valiny tamin'i Mª Teresa
Manantena aho fa tianao ny Mª. Teresa, hoy ianao amiko. Mirary ny soa indrindra.
TERE dia hoy izy:
MANarahaba NY FORUM, IZAHAY NOVATSY TAMIN'IZAO TONTOLO IZAO DIA NAMANA NY DEMONSTRATION ARY EFA NITONDRA ANAO NY TERMOMIX SY NY FAHAMARINANA TOKONY HITADIAVINA IZAO, FA MBOLA MITADY REHETRA REHETRA AMIN'NY THERMOMIX ARY ETO AMIN'NY FORUM dia misy VITSOKA TAMIN'IZY IREO, Azoko atao ny mitady DONORCI MISAOTRA TODASSSS
Valio amin'i TERE
Salama Tere, ny marina dia maro ireo bilaogy misy karazan-tsakafo hafa. Jereo ny bilaogy "diet with themromix". Mirary ny soa indrindra.
Salady tena matsiro tokoa !!!! Ho salady fahavaratra io hee hee, mora sy hafa !!!! Efa nomaniko androany fa miaraka amina fromazy sitrana satria tsy vao sy izy io ary tena tsara koa !!! Misaotra anao fa mety tia salady ny vadiko !! Misaotra an'i Muxas tamin'ny fanampianao !!! Tsy haiko ny fomba fanaovanao fotoana… oroka mux
Faly be aho fa tianao izany, Mamiavila!. Misaotra betsaka anao nahita anay. Oroka.
Vera dia hoy izy:
Hanao ny salady aho anio alina, ny tena marina dia tsara ny fahitany hunnnnn ary holazaiko anao.
Mamaly an'i vera
Manantena aho fa tianao izany, Vera! Holazainao amiko.
Voasarimakirana vita amin'ny vanila Raspberry
Sponjy mofomamy misy yaorta hosotroina